K: မျက်ကွယ်ထောင့်ကို ခေါင်းငဲ့ကြည့်ခြင်း
သူ မျှော် နေတဲ့.. စာအုပ်ကလေးက.. ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ကနေ.. ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာ ခဲ့ပြီ။
အမ ကို မှာမဲ့သာ မှာရတာ.. အားတော့ နာသား..။ သူ့မှာလဲ..ဟိုလူမှာ..ဒီလူမှာ ဖြစ်နေ ရင်တော့..အကုန်အကျ များမှာ စိုးတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့.. အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နေ့ ကတည်းက.. ၄၇ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အတွက် အမှတ်တရ ထုတ်ဝေ လိုက်တဲ့..မင်းကိုနိုင် ရဲ့ စာအုပ်လေးကို အရမ်း ဖတ်ကြည့်ချင် စိတ်ဝင်စား နေခဲ့တာ။ ပို စိတ်ဝင်စား စေ ခဲ့တာက… ရသ ဖွဲ့ အချစ် ဇတ်လမ်းလေး တခုကို အခြေခံ ထား သတဲ့…။
မင်းကိုနိုင် ကို.. တော်လှန်ရေး သမားမို့လို့..နိုင်ငံရေး သမား ပီသဖို့…ဆိုပြီး.. အချစ် ဇတ်လမ်း တခု က နေ.. ဝေးဝေး ခွာကြည့် ချင်တယ် ဆိုရင်တော့.. သဘာဝ တရား တခု ကို အတိအကျ လွဲချော် ခြင်းသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
နောက်ကြည့်မှန် ဆိုတဲ့..စာအုပ် အညိုလေး ကို ကြောင်တကြောင် ကြွက်မိ ထားသလို.. မစားရက်.. စားရက်.. မဖတ်ရက်.. ဖတ်ရက်...အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ကြည့်ရင်း.. မျက်နှာဖုံး သရုပ်ဖော်ပုံ ကို သဘောကျ နေမိသည်။ ကားတစီး ရှေ့ဆက်မောင်းဖို့.. နောက်ကြည့်မှန် တချပ်..ဒါမှ မဟုတ်.. နှစ် ချပ် .. ဒီ့အပြင် ကြည့်ချင်သေးရင် သုံးချပ် ထိ တောင် ကြည့်ဖို့ လို သည်ပဲ။ ဒီစာအုပ် အဖုံး က..ကား မှန် လေးချပ်မှာတော့..ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကြီးရယ်.. ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ကြီးရယ်.. ဒီရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးကို သွေးစွန်းစေခဲ့တဲ့..သေနတ်ကိုင် လူတစုရယ်.. နောက်ပြီးတော့.. ချစ်ခြင်း တရား ရယ်။ ကား နောက်ကြည့်မှန် လေး ခု ထဲက.. ပေါ် နေတဲ့.. အတိတ် တွေ..အရိပ်တွေက.. အဓိပ္ပါယ် ပါလှသည်။ သူကတော့ အဆန်းထွင် တွေးချင်သေးသည်။ ကားမောင်းရင်.. နောက်ကြည့်မှန် နဲ့ တင် လုံလောက် လို့လား.. Blind spot ဆိုတာကို.. ခေါင်းပြန် လှည့်ပြီး..ကြည့်ရ သေးသည် မဟုတ်လား။ ရှိနေတတ်တဲ့ မျက်ကွယ်ထောင့် တွေ ကို ခေါင်းကျော် ကြည့် ဖို့..အမြဲ သတိ ထား နေရ တတ်သည် လေ။
မင်းကိုနိုင် ကို လူတိုင်း လို သိနေကြပေမဲ့… သူ့ဆီက..စကားသံ တွေက တော့.. ကြားရ ခဲ လှသည်။ သွားလာ လှုပ်ရှား နေတဲ့..သူ့ကို မြင် ရ တွေ့ရ တာ.. အနှစ် ၂၀ ကျော် ဆိုတဲ့ ကာလ တလျှောက်လုံး ထဲမှာ.. ဘယ်နှယ် ရက်စာ လောက်များ.. ရှိခဲ့ ဖူး သလဲ…။ တကယ့် မှ.. ရှားပါး လှ တဲ့..ပုံရိပ် တွေ…။ အသံ တွေ..။ ခံစားချက်တွေ။ အထူးသဖြင့်..သူ့ရဲ့ အချစ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ခံစားချက် တွေကို..လူ တွေ စိတ်ဝင်တစား ရှိ လှတာ..ဘာလို့ လဲ မသိ။ သူ့ရဲ့.. ဇတ်ဟန်ပါတဲ့.. အပြောအဆို တွေ ကြောင့်လား ။ ရဲရင့် တည်ကြည်တဲ့ အတွေးအခေါ် ခံယူချက်တွေ ကြား မှာ၊ တွဲစပ် ယှက်နွယ် ပါလာ တတ်တဲ့..နုရွ လှပ တဲ့..ကဗျာ ပါဒ စကားလုံး လေး တွေ ကြောင့် လား ။ တင့်တည် ရည်မွန် တဲ့.. လူရွယ် တယောက် ရဲ့..ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့.. နုပျို လွတ်လပ်ချိန် တွေ အတွက်လား…။
၁၆ နှစ်ကျော်ကြာ အကျဉ်းထောင် ထဲမှာ.. နေထိုင်ခဲ့ ပြီး.. လွတ်မြောက် လာတဲ့.. နေ့မှာ… ဦးဦး ဖျားဖျား ရေဒီယို အစီအစဉ် တခု ကတောင် …မထင်မှတ်ပဲ.. သူ့ရဲ့ အချစ် ခံစားချက် တွေကို မေးခွန်း ထုတ်တာ ကြား ခဲ့ ကြ ဘူး သည်။ အဲဒီ တုန်းက.. သူ ဖြေသွားခဲ့ တဲ့ … “အခုအချိန်ဆို..သူလဲ သူ့ဘ၀နဲ့သူ ဖြစ်နေလောက်ပါပြီ ..” ဆိုတဲ့.. ဆွေးဆွေး မြေ့ မြေ့ စကားသံ တချို့ကို ခုထိ ကြားယောင် မိသေးသည်။
အခုတော့…ဒီ စာအုပ် ကလေး ထဲမှာ… သူ့ရဲ့ ရင်ခုန်သံ ကို ကြားဖူး လိုက်ပြီ..။
သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမူ တွေကို မြင်ခဲ့ ရပြီ ။
ပြီးတော့..သူ့ရဲ့ ပျိုရွယ်ချိန်တွေ။ ပွင့်လန်းစ နိုင်ငံရေး အတွေးအမြင်တွေ ။ သူပြောလေ့ ရှိတဲ့..ပုံတို ပတ်စတွေ.. လှပသလောက်.. တိကျ ပေါ်လွင် တဲ့.. ဥပမာ ပုံဆောင် ချက်တွေ ။ ဒသာန မြောက်တဲ့.. နိဂိုး အထုံး အဖွဲ့တွေ…။ အထူးခြား ဆုံးကတော့.. အသက်ဝင် ကူးစက် နိုင်စွမ်းပေးတဲ့…သူ့ရဲ့ အနုပညာ မြောက် ဖန်တီးမူ တခု ကို.. မျှော်လင့် ထားတဲ့ ကြားထဲက..မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့လိုက် ခြင်းပင်။
တကယ်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ နဲ့.. အရမ်းဖတ်ချင် မျှော်လင့် နေပေမဲ့… နာမည်သာ ကြီးနေတာ.. ဒီလောက်ကြီး လည်း ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါလေ.. ဆိုတဲ့.. သံသယ က .. ရှိနေခဲ့သည်။ စာမျက်နှာ ကလည်း ၁၇၀ လောက်ပဲ ဆိုတော့.. သိန်းဖေမြင့် ရဲ့ သပိတ်မှောက် ကျောင်း သား လို မျိုး တော့..မျှော်လင့် စရာ မလို တာ.. သိသာ နေပြီ ။ ဒီလိုနဲ့.. . စာလုံး အရွယ် ခပ်သေးသေး တွေ နဲ့ ကျစ်ကျစ် လစ်လစ် စာစီ ထားတဲ့.. နောက်ကြည့်မှန် စာအုပ်ကလေး ကို.. ခပ်ဖြည်းဖြည်း ခြင်း ..ဖွင့်လှန် လိုက် မိတော့သည်။
သည်ပန်းချီကား တချပ်လုံးတွင် တစုံတရာ ဖြည့်စွက်ရန် လိုနေသည် ဟု သူမ အနေဖြင့်တောင့်တ မိသည်မှာ ကြာပြီ။ ခုလို နွေဦးတွင် ပို၍ ထင်ရှား သည်မှာ နောက်ခံ ကွင်းပြင်နှင့် မှုန်ကျကျ ကားလမ်း၊ ပြီးတော့ ဟိုတပုံ သည်တပုံ စုထားသည့် သံလမ်း တိုရှည် များနှင့် ဇလီဖားတုံး အပုံ တို့ရှေ့မှာ ထီးတည်း ကုက္ကိုပင်ကြီး က ခါးနွဲ့နွဲ့ နှင့်ထီးဆောင်း ထားသော မိန်းမနှယ်။ တံလျှပ်တွေ ကြွယ်သည့် နေ့လည်ခင်းမှာ ညိုတယောက်ထဲထိုမြင်ကွင်းကို ကြည့်ရင်း..လက်တွေ့ကျသော အလုပ်ကို လုပ်ဖြစ်ခဲ့ သည်။
တောမြို့လေး တမြို့ ရဲ့ ….. ပျင်းရိ ငြီးငွေ့ဖွယ် နွေ နေ့လည် တခု မှာ.. ၁၀ တန်းဖြေ ပြီး ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားတဲ့.. မီးရထား ရုံပိုင် ရဲ့ သမီးလေး တယောက်… ကုက္ကိုပင်ကြီး အောက် .. ဝေနေယျ ရေအိုးစင်လေး ထိုးဖို့.. အလုပ်ရှုပ်နေ ပုံ လေး နဲ့ စလိုက်တဲ့.. ဇာတ်လမ်းလေး သည်… ဖတ်နေသူ ရဲ့ ရင်ထဲကို လျင်လျင်မြန်မြန် ခုန်ဝင် ကူးစက် သွား တော့ သည်။
အဲဒီ အချိန်တွေ တုန်းက…. စာဖတ်နေ သူ သည် လည်း.. ၁၀ တန်း ဖြေပြီးကာစ ၁၆ နှစ် အရွယ်..။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်က..ငွေစက္ကူ သိမ်း.. ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမူ တွေ ဖြစ်လာလို့… ကျောင်းတွေ ပိတ်ပြီး ပြန်ရောက် လာကြတဲ့.. အကို တွေ အမ တွေ ရဲ့.. စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်.. ပြောပြချက် တွေကို.. ပါးစပ် အဟောင်းသား နဲ့.... နားထောင် နေ ခဲ့ ဖူး သူ။ ကျောင်းဆောင်တွေ ရှေ့မှာ…ပိုက်ဆံ တွေ စက္ကူစုတ်ဖြစ်သွားလို့.. ကျောင်းသားတွေ..အော်ဟစ် ဆူပူ ကြတာ တဲ့… ဖုန်းမော် တို့.. သေနတ် နဲ့ ပြစ်ခံ ရ တာတဲ့။ အင်းလျားကန် ဘောင်ပေါ်မှာ.. လုံထိန်းတွေက တုတ်တွေ နဲ့ လိုက်ရိုက် တာများ..ရေထဲထိ ဆင်းပြီး အသေရိုက်တာ…တဲ့။ ကျောင်းကြီးကို..အဓိပတိ ပေါက်ကနေ အပေါက်တွေ အကုန်ပိတ် ဖမ်းတာ… အာစီ ထဲက..လူတွေ အကုန်ပါသွား တာ တဲ့..။
နယ်တွေ ကို ပြန်ရောက်လာတဲ့…တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တွေ နဲ့.. နယ်ခံ ကျောင်းသား..လူထု ရဲ့ ချိတ်ဆက် လှုပ်ရှားမူတွေ ။ ရန်ကုန်ကနေ.. နယ်အသီးအသီး ကို လျှို့ဝှက် ဆင်းလာကြတဲ့.. စည်းရုံး လှုံ့ဆော်သူ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တွေ…။ တရက်မှာ.. သူတို့ အိမ်ရှေ့ကို ငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက် နဲ့ ရောက်လာပီး… သူ့အမ နာမည်ကို မေးလာတဲ့.. မျက်နှာ ရှုသိုးသိုး နဲ့..လူတယောက် ။ ( နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ကျောင်းသူ အမ ရဲ့ စီနီယာ အတန်းသား.. ကိုကိုကြီး မှန်း..နောက်တော့ သိခဲ့ ရသည်။ ) အားလုံးက.. လျှို့ဝှက်သည်းဖို ၀တ္တုတပုဒ် ထက် မလျော့ အောင်.. သိပ်သိပ်သည်းသည်း ရှိ လှ သည်။
အခုလဲ …ဇတ်လမ်းထဲမှာ… အားလုံး ဒီအတိုင်း ရှိနေသည်။ တကယ်ကတော့.. အဲဒီ အမြန်ရထား တောင် မဆိုက် တဲ့.. ကြားဘူတာ တောမြို့လေး တခု မှာ တင်မက..အဲဒီအချိန်က.. နယ်တိုင်း မြို့တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ…အားလုံး နှင်နှင်..ဒီ အတိုင်းပဲ ရှိနေခဲ့ ပေလိမ့်မည်…။
လောက ကို ခေါင်းပြူ ကြည့်ကာစ.. ၁၀ တန်းကျောင်းသူ “ညို” တွေ ။ ကျောင်းပိတ် လို့ နယ်ပြန်ရောက် နေတဲ့…တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ “မခင်အေး” တွေ။ ညဖက် ရေဒီယိုတွေ..တကျွိကျွိ ဖမ်းရင်း… ကွမ်းတမြုံ့မြုံ့ နဲ့.. မျှော်လင့်ချက် တွေပါ..ရောမြုံ့ နေမဲ့..ရုံပိုင်ကြီး “ဦးခင်ရွှေ” တွေ…။ …ဒယ်ပိုင်း ထဲမှာ.. အမြှုပ်ထ နေတဲ့.. အရင်လို စားမကောင်းတော့တဲ့ ဆီ အရောအနှော တွေကို.. ဗြစ်တီး ဗြစ်တောက်.. ညီးညူရင်း..လစာနည်း ၀န်ထမ်း မိသားစု တခု ရဲ့ မီးဖိုချောင်ကို တာဝန် ယူ နေတဲ့.. “ဒေါ်တင်တင်” တွေ။ ဘူတာရုံမှာ..ညစောင့် သာသာ ပေမဲ့… ဘယ်သူ လူကောင်း ဘယ်သူ လူညံ့ ခွဲခြားတက် တဲ့.. “အဘမောင် ” လို ရိုးရိုးသားသား အဘိုးကြီးတွေ။ လောကုတ္တရာ ရေး ကို မျက်မှောက်ပြုနေပေလို့..လောကီ ရေး က..တရားမူ..မတရားမူ တွေ ကြား..တည်တည် ငြိမ် ငြိမ် ရပ်တည် ကာကွယ်ပေး နေတဲ့.. တောရကျောင်း ဆရာတော် တွေ…။ ကြုံရာ ဆုံရာ လက်သင့်ရာ နေရာရ နေတဲ့..ခေတ်အို ခေတ်ဆွေးကြီး ထဲက.. မြို့ လူကြီး..ရပ်လူကြီး ဆိုသူ တွေ နဲ့.. အရံမီးသတ်ဝတ်စုံ ၀တ်ပြီး.. လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေ အောင်..အသိ ပညာ နိမ့်ကျ လှတဲ့.. “အုန်းသန်း ” တွေ။ နိုင်ငံ တနံတလျား..အများကြီး ရှိ နေ ခဲ့ပေလိမ့်မည်။
“ဟော..စာအုပ် ဖတ်ရတော့မယ်.. ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ..ကျုပ်မှာ အရက်သမားတွေ ပြောသလို..နေစောင်းရင် ဖေသောင်းတို့ အရည်တောင်းပြီ ဆိုတာမျိုး စာဖတ်ချင်တဲ့ ဝေဒနာ ထ လွန်းလို့ ခုမှ ပြည့်တော့တယ်..” ဆိုတဲ့…အမည်မသိ..လူစိမ်း တယောက် ကို ရင်ထဲက ဖြစ်လာတဲ့..စေတနာ ယုံကြည်မူ နဲ့ အကူအညီ ပေးရင်း..
“ နေပါဦး..စာအုပ်ငှားတော့..အာမခံ ပေးရအောင်.. ညို့ကို နာမည် ပြောထားဦးလေ..” လို့ အမေး...
“ အေးဗျာ.. ဖေသောင်း လို့ပဲ မှတ်ထားဗျာ…” ဆိုရင်း.. .တော်လှန်ရေး နာမည်ဝှက် တခု ရှိလာခဲ့တဲ့..တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား “ ဖေသောင်း” တွေ ။ သူရ တွေ.. ထွန်းသက်တွေ.. ကိုမြင့်ဇော် တွေ..ခင်မောင်လတ် တွေ...။
…. လာလေ.. တပုဒ် နှစ်ပုဒ် ဆိုစမ်းပါ ဟု သူမ အား ဇွတ်ခေါ် ဆို ခိုင်း ပြီး..သီချင်းမဆုံးခင် တဟဲဟဲ ရယ်ကာ လက်ကွက် မှား သွားလို့ ဟု နောက်တီး နောက် တောက် လုပ်လေ့ ရှိသော သူမ မောင်လေး သည် တောရ ဘုန်းကြီး ကျောင်း၌ ယောင်ချာချာ အဖော်မဲ့ နေ ရှာရော့မည်…. လို့.. ကြိတ်ကြိတ် ပူပန် စိုးရိမ် နေကြ ရ တဲ့… မရီနွယ် တို့လို.. သားအမိ တွေ။ အဲဒီလို မိသားစု တွေ..အဲဒီလို ပူပန် သောက တွေ.. ၁၉၈၈ ဆိုတဲ့.. အချိန်ကာလ နောက်ခံ ကြီး မှာ… အများအပြား ရှိနေ ခဲ့ သည်ပင်။
တကယ်ကတော့.. အဲဒီ မတိုင်ခင် မှာရော..အဲဒီ နောက်ပိုင်း မှာရော..ဒီ အတိုင်းပဲ တလျှောက်လုံး ဖြစ်နေ ခဲ့ တာ ပဲ မဟုတ်လား။ ခေတ်တခု ခြင်းစီ ရဲ့ သမိုင်း အဆက်အစပ် နဲ့..တော်လှန်ရေး တခု ရဲ့ အရုပ်အသိမ်း ကိုလည်း..စာရေးသူက.. သာမန် အိမ်ရှင်မ မိခင် တယောက်ရဲ့ သိနားလည် မူ အသွင် နဲ့ ပုံဖော် သွားခဲ့သေးသည်။
ဒေါ်တင်တင်က..ညို အား လက်ညိုးထိုးပြပြီး..ညိုတို့ လေးလေး တယောက်က..ငါ့မောင်
အငယ်ပေါ့။ သူတို့တုန်းကလည်း မင်းတို့လို ၀င်ပါမိလို့..အထဲမှာ အကြာကြီး
နေခဲ့ရသေးတယ်။ ပြန်ထွက်လာတော့ ကျောင်းလည်း ဆက်မတက်ဖြစ် တ၀က်တပျက် နဲ့ ဘွဲလည်း မရပဲ ဆုံးရှုံးသွားတာပဲ။ ဖြစ်တော့ မင်းတို့ အခံဖက်ချည်းပဲ…
တကယ်တော့.. ဒီ ၀တ္တုလေး ဟာ.. သမိုင်းနောက်ခံ အချစ်ဇာတ်လမ်း လား ။ အချစ် နောက်ခံ.. သမိုင်းပုံရိပ် တခုလား… ။ စာဖတ်သူ အတွက်တော့.. နဲနဲလေး..အကျဉ်းချုံ့ သလို ခံစားနေရတာက လွဲရင်.. (သူများတွေ ပြောသလို ) ရှစ်လေးလုံး ရဲ့ မြင်ကွင်းတွေ ပါးလျ နေတာက လွဲရင်.. အချိန်ကာလ ကိန်းဂဏန်း တွေ မပါဝင်တာက လွဲရင်.. အဖြစ်အပျက် စုံစုံ နဲ့..ခံစားမူ အစုစု ကို.. ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် လှလှပပ.. ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့.. စာအုပ်ကောင်းလေး အဖြစ် ၊ ရင်တွင်းဖြစ် ခံစားချက်တွေ ကို..တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမူ အတွေ့အကြုံတွေ နဲ့..အချိုးကျကျ ရောယှက် ယက်လုပ် ထားတဲ့ မင်းကိုနိုင် ရဲ့ ပထမဆုံး ၀တ္တုလေး အဖြစ် ၊ တသက်စာ အမှတ်တရ.. သိမ်းဆည်း ထားရပေတော့မည်။
စာရေးသူက..ညို့နေရာမှာ အများဆုံး နေပေမဲ့… တခါတလေ.. ဖေသောင်း ဖြစ်သွား လိုက်.. မခင်အေး ဖြစ်သွားလိုက်.. အကူး အဆက် မြန်ပေမဲ့.. ဖတ်နေရင်းပဲ.. ပြေပြစ် သွား ပြန်သည်။ စကားပြော.. အဖွင့်..အပိတ် သင်္ကေတ တွေ.. တိကျတဲ့..တြိယာပုဒ်တွေ.. သုံးရိုးသုံးစဉ် သန္ဗန္ဓတွေ.. သဒ္ဒါထုံးတွေ အများကြီး သုံးမထားသော်လည်း.. တွန့်လိမ် ဖြစ်ညှစ် ဆန်းသစ် ထားတဲ့..အရေးအသား မျိုးလည်း မဟုတ်ပဲ.. တည်ငြိမ် သပ်ရပ် တဲ့.. စာ တပုဒ် လို့သာ မြင်မိသည်။
စာဖတ်သူ သူ့ အတွက်.. သိပ်ကို သေချာ တဲ့… အချက်တွေ ကတော့.. ညို နဲ့ အတူ ပျော်ရွှင် ရင်ခုန် နေ မိတဲ့..ထူးခြားတဲ့ ကူးစက်နိုင်စွမ်း…။ ညို့လိုပဲ .. လေးစား မြတ်နိုး နေမိတဲ့.. ညွတ်ပျောင်း မူ ။
“ ကြယ်တွေ မှာလည်း ကြယ်လူကြီး ကြယ်ကလေး တွေ ရှိတယ်။ ဓူဝံကြယ် က..အဖိုးကြီး မို့
ပြီးတော့..ဖေသောင်း အနားမှာ အတူလိုက်ပါရင်း ….. စိုးရွံ့ပူပန်နေမိ… အလုပ်တွေ ရှုပ်နေမိ.. အာရုံတွေ များနေမိ.. နာသာ ခံခက် နေမိတဲ့.. အာရုံဝင်စားမူ…ရှုခင်းအစုံစုံ ။ှ
“ ကျောခိုင်းရာ မှာ.. ဘာဖြစ်ကျန် ခဲ့မှန်း မသိသူ တွေ အတွက် နောက်ကြည့်မှန် တချပ် လှူချင် တာ...” လို့ ဆောင့်ကြီး အောင့်ကြီး ပြောလိုက်တဲ့.. မခင်အေး ရဲ့ အပြစ်တင် စကား အတွက် ၊ " ဒါကတော့ ".. လို့ စာနာ နေမူ ။ အဲဒါ တွေ ကြားထဲက .. သံယောဇဉ် ကြိုးတွေကို ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ထုံးနှောင် ဖြေလျော့ ခဲ့ သလဲ ဆိုတဲ့ ၊ အချစ် နဲ့ တော်လှန်ရေး အပေါ် ခံယူ ချက် တွေ ကိုတော့ ၊ မင်းကိုနိုင် ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အသံ လို့ပဲ ယုံယုံကြည်ကြည် ကြားယောင်ရင်..ခပ်ဖွဖွ ရေရွတ် ကြည့်နေမိ တော့သည်။
---- သံယောဇဉ် ဆိုတာ ခဏလောက် ခွါချ ထား လို့ရရင် ကောင်းမယ်။ မရတော့လည်း တို့တတွေ မေ့ချင်ယောင် ဆောင်နေကြရုံပဲ ညို။ တခါတလေ မှာ သံယောဇဉ် ဟာ သတ္တ၀ါတွေ အတွက် ခံစားချင်စရာ အကောင်းဆုံး ထွေးပွေ့မူ ဖြစ်ပေမဲ့ လိုအပ်တဲ့ အခါ မှာ စွန့်ရဲရလိမ့်မယ်။ ညိုဟာ ကိုယ့် အတွက် ဖိနပ် တရံ လိုပဲ အနစ်နာ ခံပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေ ကို အလေး အမြတ် သိမှတ် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေနစ်လို့ ကူးကြပြီ ဆိုရင်ဖိနပ်ကို စွန့်ရတာပဲ ညို….
ကိုယ့်အတွက်တော့ လမ်းနှစ်သွယ် ရှိတယ်။ ရည်ရွယ်တာတော့ တူပေမဲ့..နှစ်နေရာ ခွဲ အလုပ် လုပ်ရမယ်။ တောထဲ သွားရမလား...၊ မြို့မှာပဲ ဆက်လှုပ်ရှား ရမလား.. လို့ ညို့ကို ပြောအပြီးမှာ..ဖေသောင်း ဘယ်လမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ သလဲ... ဘယ်ကို ခရီး ဆိုက်ခဲ့ သလဲ ဆိုတာ... အားလုံး ခန့်မှန်း နားလည် နိုင် ကြပေမဲ့...သူရ တုို့ ခင်မောင်လတ် တို့....ကျတော့ရော...။ ဘယ် လမ်း ကို ရွေးခဲ့ ကြမလဲ .. ဘယ် တိုင်း ဘယ်ဌါနီ ထိ ခရီးဆန့် ခဲ့ ကြ ပြီ လဲ... ဆိုတာတော့.. ဘယ်သူ မှ မသိနိုင်။
နောက်ဆုံး …ဒီ ၀တ္တုလေး ကို .. ပုဒ်ထီး ချ လိုက်တော့..... မထင်မှတ် ထား ပဲ ..မခင်အေး တို့ သားအမိ နှစ်ယောက် နဲ့ အတူ.. ကာလ အလင်္ကာ တခု ထဲ မှာ ဖြစ်နေ သည် ။ အမြန်ရထား တစီး ပေါ်က.. ငွေ့ရည် ဖွဲ့ လာတဲ့.. မှုံရီရီ အကြည့် တွေ နဲ့ အတူ…ေ၀၀ါးဝါး မျှော်လင့်ချက် တွေ ကို… စာရေးသူ မင်းကိုနိုင် တယောက် ဘယ်လို များ ကြိုသိ နေခဲ့ပါလိမ့်။
နောက်ကြည့်မှန် ထဲမှာ..တဲ့တဲ့ ရှင်းရှင်း မြင်နေ ခဲ့ရတာက.. မြန်မာ့ သမိုင်း ထဲ က.. ရှစ် လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်ပေမဲ့… မျက်ကွယ်ထောင့် ကို ခေါင်းငဲ့ ကြည့် ရင်း မြင်ရတာ ကတော့.. လူ နှစ်ယောက်ရဲ့ ပုဂ္ဂလ ဘ၀ သံယောဇဉ် တွေ ။
နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေ၊ လူချမ်းသာ ပညာရှင်ကြီးတွေ တယောက်မှ မပါတဲ့… သာမန်လူတန်းစား အားလုံး ကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့.. မြန်မာ လူမူအသိုင်းအ၀ိုင်းလေး တခု ရဲ့ အနေအစား နိုင်ငံရေး အသိအမြင် တွေ ။
ပြီးတော့… လက်နက် နိုင်ငံတော်ကြီးကို .. အံတု ခဲ့တဲ့.. လောက်လေးခွ တချို့ ရဲ့ မျှော့ကြိုး အလျော့ အတင်း .. အချိန် အဆ တွေ..။
စာအုပ် ၀ယ်ပြီး လက်ဆောင်ပို့ပေးတဲ့..မခင်မင်းဇော် အား ကျေးဇူးတင်လျက်-
Labels: Books , Free Burma , Reviews
မကေ ကျေးဇူးပါပဲ။ စာအုပ် အမြည်းလေးဖတ်ရတာ။ ရအောင်ရှာဦးမယ်။
သူ့ချစ်သူအကြောင်းပြောတဲ့ အင်တာဗြူး နားထောင်ရဖူးတယ်။ စာအုပ်က ဘန်ကောက်မှာပဲ မှာလို့ရတာလား။ မိုးမခတို့ ချိုသင်းတို့ဆိုင်မှာလည်း ရှိမယ် ထင်တယ် နော်။
မမကေသွယ်ရေ ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်..ညီမလေးတော့ အေအေပီပီက လက်ဆောင်ပေးမယ့် စာအုပ်လေးကို မျှော်နေတယ် သူ့စာအုပ်လေးက ရံပုံငွေအတွက် ဘတ် တစ်ရာနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်တဲ့ တကယ်လို့ ထိုင်းမှာ ၀ယ်ချင်ရင် မဆုမွန် ဘန်ကောက်ကနေ ကူပေးလို့ရတယ်နော်
ဝယ်ဖို့မလွယ်တဲ့ စာအုပ်လေးကို မကေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့
ကျွန်တော်က ကြီးကြီး ငယ်ငယ် အမလို့ ပဲ လေးစားသမှုနဲ့ ပဲ
ခေါ်ပရစေနော်။ စာနဲ့ တူတဲ့ စာလေးတွေကို ကြိုးစားရေးနေရ
သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြန်လိုက်လာပြီး အမ ရဲ့စာကောင်းတွေ
ကို နေရာပေးတန်ဘိုး ထားချင်တဲ့ စေတနာတွေနဲ့စာကောင်း
တစ်ပုဒ်ကို နေရာပေး ရေးတင်ထားတဲ့မင်းကိုနိူင်ရဲ့စာလေးကို
အသျဉ်းဖတ်ရတာလေးနဲ့ ပဲ ရင်ထဲနင့် နေမိရပါတယ်လို့ ။
မင်းကိုနိူင်နဲ့ တစ်ချိန်ထဲ စစ်ဖိနပ်အောက်မှာပဲ ကျောင်းသားဘဝ
ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ ရသူတစ်ယောက်အနေနဲ့လေးစားခဲ့ ရသူတစ်
ယောက်ရဲ့ရှားပါးတဲ့ စာလေးကို ဖတ်လိုက်ရလို့အမကိုပဲ
ကျေးဇူးကမ္ဘာလောက် တင်ရှိမိပါကြောင်းလို့ ...။
အဲဒီ ကိုမင်းကိုနိူင်ရဲ့စာအုပ်လေးကိုပဲ အမလို ဖတ်ချင်စိတ်တွေ
ပြင်းပြလာမိလို့အမကိုပဲ တောင်းဆိုပါရစေလို့ ။ တိုးတက်နေ
တဲ့အွန်လိုင်းခေတ်ကြီးထဲမှာ အမဆီက ကျွန်တော်တို့ 
ထိုင်ဝမ်ကို မှာယူလို့ ရလိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့် မိရင်း အလော
သုံးဆယ်မဟုတ်ဖဲ အားလွန်းတဲ့ တစ်နေ့ဆက်သွယ်လို့ ရအောင်
ကျွန်တော့်vzo လိပ်စာလေး ကျွန်တော်ကပဲ အရင်ပေးပရ
စေလို့ ။ vzo account ဖွင်ပြီး ahphyulayy ဆို
ရင်ပဲ ရပါပြီ။ မှာယူဘို့ ပါ။သူ့ စာအုပ်လေးကို။
ဂျီမေးလ်းကတော့ ahphyulay65(aသင်္ကေတ အက်)
ကို ကီးဘုတ်ကြောင်နေလို့ ရိုက်မရသေးပါ၊gmail.com ပါ။
အမ ကိုအလုပ်ပေး၊ဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်သွားရင်တော့ခွင့် လွှတ်
မအယ် ... စာအုပ်ရနိုင်မဲ့ နေရာတွေ ရှိမှာပါ.. အနဲဆုံး အေအေပီပီ ကို လှမ်းမှာရင် ရမယ်ထင်တယ်။ အဖြူလေး လည်း.. တခြားမှာ ရှာကြည့်ပါလား။ ကျမ ကူညီနိုင်မယ် မထင်ဘူး.. ရေးထားတဲ့ အတိုင်း..ထိုင်းက လက်ဆောင်ပို့ပေးလို့သာ ဖတ်ရတာပါ။ VZO တွေ Gmail တွေ လည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့ နော်။ စာလာဖတ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ခင်မင်စွာဖြင့်=
အမရေ အမြည်းလေးဖတ်ရတာကိုပဲ ကျေးဇူးဗျ
ဘူ့ ကို မှာရ မလဲ မသိဘူး..း(
မကေရေ မအယ်လည်း ထိုင်းက သူငယ်ချင်းကို လှမ်းမှာ လိုက်တယ်။ ရတော့မယ်။:))
လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့  စာအုပ်ကို သတင်းကြားကတည်းက ဖတ်ချင်နေတာ... ခု ကေ့ဆီကနေ အမြည်းဖတ်လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးပါနော်...
ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်အုံးမယ် မကေရေ...
အဖြူလေး တို့ မအယ် တို့... စာအုပ်ဖတ်ချင်သူများ..ဟောဒမှာ.. မှာယူ နိုင်တယ်..တဲ့။
ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။ အော်စီမှာကော စာအုပ်မှာလို့ရတဲ့ နေရာ မရှိဘူးလား။ ကျွန်မလည်း သိပ်ဖတ်ချင်တယ်။ ၁၉၈၈ အထိ မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သမိုင်းအမှန်ကို လုံးဝမသိခဲ့တဲ့ ကျွန်မက သူ့စာတစောင်နဲ့ ကျွန်မ သမိုင်းအမှန်ကို ပထမဦးဆုံး သိရလို့ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကျွန်မအတွက် ပထမဦးဆုံး ကြားဆရာ ဖြစ်သလို ခေါင်းဆောင်တွေအထဲမှာလည်း အလေးစားဆုံးပါပဲ။ ကျွန်မ ဒီစာအုပ်ကို သိပ်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ အော်စီမှာ မရှိရင်တော့ စင်္ကာပူကိုပဲ မှာရမယ်ထင်တယ်။
နောက်ကြည့်မှန်ကို သိပ် ဖတ်ချင်သွားပြီ။ ရှာဝယ်အုံးမှပဲ။
ခုလို မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။
စာအုပ်ထဲက စာလေးတွေကို QUOTE လုပ်ထားတာလေး ဘယ်လို လုပ်ရတာလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။
မကေ.. စာအုပ်အကြောင်းကို ကြားတောင်မကြားဖူးလို့ ဝေမျှပေးတာကို ကျေးဇူးပါ၊ လိုက်ရှာကြည့်ဦးမယ်
မိုးကုတ်သား - အဲဒါက..blogspot မှာပဲ ပါတဲ့ compose အောက်က quote tab ကိုပဲ သုံးတာပါ ( ' ----' ) အဲဒီ သင်္ကေတပဲ။ ပို့စ်ကို publish မလုပ်ခင်တော့..ဘာမှ ပုံမပေါ်ဘူး..မသိသာဘူး။ စာလုံးတွေ နေရာနဲနဲ ရွေ့သွားတာပဲ ရှိတယ်။ ပြီးမှ.. တင်ပီးမှ မြင်ရမယ်။ ဒီဇိုင်း အရောင်ကတော့..ကိုယ်ယူထားတဲ့ တန်ပလိတ် ကို လိုက်လို့ မတူကြဘူး.. customize လုပ်နည်းတော့ နားမလည်ဘူး..။
စာအုပ်ကို မသိသေးတဲ့ .မီး (Mie) အတွက်လည်း.. မှာယူရတာ အဆင်ပြေ မှာပါ..၀မ်းသာမိတယ်။း)
ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ အခုမှပဲ အစ်မရဲ့ ရီဗျူးလေးကို ဖတ်မိတော့တယ် ဒီနေ့တော့ အစ်မ blog မှာ တော်တော်များများ ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်
ဖတ်ပြီးသွားပြီ။ ၂၆ နှစ်အရွယ်မှာရေးတဲ့ စာရေးသူရဲ့ နှလုံးသားက အနုပညာကို ဦးညွတ်မိပါတယ်။